#GUDDIGII DHISMAHA WADADA BOOSAASO OO XABSIGA LAGA SII DAAYAY - Get Latest News From Horn of Africa
#GUDDIGII DHISMAHA WADADA BOOSAASO OO XABSIGA LAGA SII DAAYAY
By WARIYAHA MUQDISHO On Jul 23, 2019 Last updated Jul 23, 2019
Maxkamadda derejada kowaad ee gobolka Bari ayaa maanta xorriyaddooda dib ugu celisay afar xubnood oo ka tirsan guddiga dib u-dhiska wadada bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Saddex xubnood oo guddiga ka tirsan ayaa Khamiistii hore xabsiga la dhigay kadib markii ay dowladda Federaalka Soomaaliya ka guddoomeen lacag deeq ah oo aan soo marin nidaamka Maaliyadda Puntland taasi oo dowladda Federaalku ugu deeqday dib–dhiska wadada bartamaha Boosaaso.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga dib-u-dhiska wadada bartamaha Boosaaso Sheikh Maxamed Macallin Axmed ayaa isna xabsiga la dhigay laba maalmood ka hor isagoo ka soo laabtay safar uu puntland uga maqnaa.
Xubnaha la xiray oo dhammaantood duhurnimadii maanta la horgeeyay maxkamadda derejada kowaad ee gobolka Bari ayaa xorriyadooda dib loogu celiyay kadib markii sida la sheegay wax dembiya lagu waayay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleed Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo maanta hadlay xariga ganacsatada ku xireed Boosaaso ayaa sheegay in uu aad ugu xunyahey Xariga Masuuliyiintaan balse uusan ka hor dhacayn Baaritaanadda Maxkamada Puntland.